बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Friday, 02 October, 2020
बहुआयमिकताका लागि खुल्यो ढोका : नेपाल अघि बढ्न सक्ला ? access_timeअसोज ३०, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ यस पटक (अक्टोबर ११–१२, २०१९ मा भारत र त्यसलगत्तै १२–१३ मा नेपाल) को तीनदिने राजकीय भ्रमण सिध्याएर स्वदेश फर्किएपछि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले १५ अक्टोबर २०१९ का दिन भ्रमणका उपलब्धिबारे पत्रकारहरुलाई सुचित गरेको समाचार इन्...
‘वातावरणीय विनास’ : हेर्ने जिम्मा कसको हो सरकार ? access_timeसाउन ३०, २०७६
वर्षा सकिएको छैन । पहिला पहिला जस्तो मनसुन ४ महिना (जेठ, असार, साउन, भदौ) को पनि रहेन । अब हप्ता दस दिन लाग्ने साउने झरी त पुराणको कथा जस्तै भयो भन्छन् पाका मानिसहरु । हामी आफैले थाहा पाउँदा पनि सप्ताहव्यापी झरी झम झम परिरहन्थ्यो । अग्रजहरु भन्छन्, ‘लामो झरीका...
इरान-अमेरिकी द्वन्द्वः के पर्न सक्छ नेपाललाई असर ? access_timeअसार १३, २०७६
यतिखेर इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिँदै गएको छ । उनीहरुबीचको तनाव निकै जोखिपूर्ण विन्दुमा आइपुगेको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स भित्र्याउने मूल थलो अरब क्षेत्रमा युद्ध भड्किएमा त्यसको स्वभाविक...
निजीकरणले राज्यको भूमिका गौण बनायो, राज्यले आफ्ना उद्योग गुमायो access_timeजेठ २७, २०७६
२०४६ को प्रजातन्त्रपछि हामीले देशको आर्थिक अवस्था उदारवादी मूल्य मान्यतामा रहेको पायौँ । आम मानिसले स्वतन्त्ररूपले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । समाजमा आर्थिक, सामजिक र राजनीतिक रूपबाट विकसित गर्नुपर्ने थियो । सबैका लागि खाद्य सुरक्षा, शिक्षा लगायत जोह...